गायक राजेशपायल राई विवादमा मुछिए «
गायक राजेशपायल राई विवादमा मुछिए
प्रकाशित मिति : ७ बैशाख २०७६, शनिबार १४:५३
काठमाडौं । गीतकार भद्रकला आङबुहाङ राई र नेपाली संगितका वादशाह मानिएका राजेशपायल राईसँगको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । गायक राईले केहि दिन अघि सार्वजनिक गरेको एल्बम दर्शन नमस्ते-४ मा भद्रकलाको शब्द रहेको एउटा गीत समावेश छ । समावेश सोल्टिनी बोलको गीतमा भिडियो समेत निर्माण गरिएको छ । गायक राईसँग हङकङलाई कर्मथलो बनाएकी गीतकार भद्रकलाले दुईमहिनाअघि हङकङमै भिडियो बनाउने सहमती गरेकी थिइन् । सोहि अनुसार भिडियो छायांकन गरिएको थियो । । यद्यपी, भिडियो सार्वजनिक गर्ने बेलामा तनाव उत्पन्न भएको छ ।
मलाई न्याय चाहियो: भद्रकला
राजेशपायलले काठमाडौमा भिडियो लञ्च गरेकै बेला हामीले हङकङमा तयार गरेको भिडियो पनि सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो । भिडियो सार्वजनिक भयो तर हामीले सुटिङ गरेको अधिकांश दृश्यहरु काटिएको छ । आफ्नो मात्र लिप्स सिङ राखेर उहाँले भिडियोको मर्मलाई मारेर आफ्नै च्यानलबाट सार्वजनिक गर्नुभएको छ, जुन कुरा मलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन । हामीले भिडियो, एल्बम सार्वजनिक गरेकै दिन विन्ध्यवासिनी मार्फत लञ्च गर्ने भनि मौखिक सहमति गरेका थियौं । तर, उहाँले आफु खुसी आफ्नो च्यानलमा भिडियो काटेर हाल्नुभयो । यो सरासर धोका हो । मेरो लगानीमा बनेको मेरो आफ्नो गीतमा उहाँले मनपरि गर्नुभयो । गीतकारको कुनै हैसियत नै राखिदिनु भएन । भिडियोलाई स्तरिय बनाउनका नेपालबाट नायिका मारिष्का पोखरेलाई तीन लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक दिएर हङकङ ल्याएका थियौं । भिडियोमा ८ लाख लगानी गरेका छौ । राजेशसँग लामो सम्बन्ध र सहकार्यले हामीले कागजी हस्ताक्षर गरेनौं । अहिले भिडियो सार्वजनिक गर्दा मनपरी गर्नुभयो, मन दुखेको छ । मेरो श्रृजनामा उहाँको मनपरि हस्तक्षेप भयो । मलाई न्याय चाहियो ।
भिडियो एउटा, च्यानल दुईवटा !
गीतकार भद्रकला र गायक राजेश पायलको बिचमा असमझदारी बढेपछि दुबैजनाले आ–आफ्नो युट्युव च्यानलबाट उक्त भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् । राजेशले केहि समयअघि भिडियो अपलोड गरेका कारण भद्रकलाले कभर नाममा भिडियो सार्वजनिक गरेकी छिन् । समाचार तयार पार्दा सम्म राजेश पायलको च्यानलबाट १ लाख ४६ हजार कटेको छ । भद्रकलाको च्यानलबाट ४ सय बढिले हेरेका छन् ।
के हो विवादको जरो ?
१३ जनवरी २०१९ का दिन गीतकार भद्रकला आङ्बुहाङद्धारा रचना गरिएको गीतहरुको प्रस्तुतीका लागि हङकङ स्थित याउमा तेई कम्युनिटी हलमा भद्रकला एकल साँझको आयोजना गरिएको थियो ।बिरामीहरु नितेश लिम्बु र सविता मिजारको सहयोगार्थ आयोजना गरिएको कार्यक्रमको आयोजकको रुपमा स्वयं भद्रकला मात्र थिईन् ।कार्यक्रममा भद्रकलाद्धारा रचित गीतहरु प्रस्तुत गर्नका लागि गायक राजेशपायल राई, गायक तथा संगितकार बादल लिम्बु, गायिका प्रविशा अधिकारी, अभिनेत्री मरिस्का पोखरेल, मोडल तथा सञ्चारकर्मी सोनिका रोकायालाई हङकङ बोलाइएको थियो । कार्यक्रममा आमन्त्रित सम्पुर्ण कलाकारहरुले भद्रकलाद्धारा रचित गीतसंगित र नृत्यहरु प्रस्तुत गरे ।
जब स्टेजमा राजेशपायल राईको प्रवेश भयो उनले अन्य रचनाको गीतबाट आफ्नो प्रस्तुती सुरु गरे । राजेशको पहिलो प्रस्तुती चलिरहेका बेला भद्रकलाका श्रीमान् ओमप्रकाश राईले म्युजिक ट्रयाक बन्द गरिदिए । कार्यक्रमको शिर्षकअनुरुप भद्रकलाका गीतहरु प्रस्तुत नगरेको भन्दै ट्रयाक बन्द गरपछि राईले स्टेज छोडे । केहि समयपछि अर्कोपटक स्टेज उक्लिएका उनले स्टेजबाटै आफु नडराउने र आफ्नो ईच्छा अनुसारको गीत प्रस्तुत गर्ने अडान राखे । केहि समयपछि स्टेजमा माइक समातेर उनले सलमान खानको डाइलग एकबार कमिट्मेन्ट कर दिया तो खुद आप्की भि नहि सुन्ता भन्दै भद्रकलाकै गीतहरु प्रस्तुत गरेका थिए । स्टेजबाटै आयोजकप्रति लक्षित गर्दै राजेशले यस्तो प्रवृतिको आयोजक पहिलोपटक भेटेको भन्दै मानिसले आफ्नो सोंच अनुसारनै व्यवहार देखाउँछ भन्दै कटाक्ष गरेका थिए ।
कार्यक्रममा राजेशले देखाएको ब्यवहारप्रति आपत्ति जनाउँदै आयोजक र राजेशपायलबीच हङकङमै दुरी बढिसकेको थियो । कार्यक्रमपश्चात न आयोजकसँग राजेशले भेट गरे न आयोजकले नै राजेशलाई भेट गर्न चाह्यो । यस बिषयमा गायक राईसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सफल हुन सकिएन । उनले निरन्तर चलाउने फोन स्विच अफ छ, फेसवुक म्यासेन्जरमा रिप्लाई आएन ।
को हुन् भद्रकला ?
हङकङलाई कर्मथलो बनाएकी भद्रकला आङबुहाङ गीतकारको रुपमा मात्रै होइन, समाजसेवामा पनि सक्रिय छिन् । तिम्रो यादमा आज आँसु बगाउँछु गीतबाट गीतका शव्द लेख्न सुरु गरेकी उनले जब शुरेश अधिकारीको संगितमा अजम्बरी गिती संग्रह ल्याइन्, त्यसपछि चर्चामा आएकी हुन् । अहिलेसम्म उनले ३ सय गीत बजारमा ल्याइसकेकी छिन् । नेपालका अधिकांस गायक–गायिकाहरुले उनका गीतमा स्वर दिइसकेका छन् । उनले लेखेको गीतमा पछिल्लो समय राजेशपायलले स्वर दिएको मैले मायाले दिएको चिनो बोलको गीत निकै चर्चित बनिरहेको छ । भद्रकलाले आफ्नै अगुवाईमा सामाजिक संस्था चागे धर्ती आमा कोष दर्ता गरेकी छिन् । समाज कल्याण परिषदमा दर्ता उक्त कोष ताप्लेजुङ चाँगेमा सामाजिक उत्थान र सहयोगका लागि स्थापना गरिएपनि पछिल्लो समय मानविय हितका लागि विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको छ ।